အရောင်ရင့်မှတ်တမ်း – ဧပြီ ၂၀၁၇ | Myanmar Gazette News Media Forum Network
Home » Editor's Notes » အရောင်ရင့်မှတ်တမ်း – ဧပြီ ၂၀၁၇
အရောင်ရင့်မှတ်တမ်း – ဧပြီ ၂၀၁၇
Posted by kai on Apr 4, 2017 in Editor's Notes, History, Myanmar Gazette | 20 comments
လွန်ခဲ့တဲ့ ၁၁နှစ် ဒီနေ့ ၄-၄-၂၀၁ရ က.. မန္တလေးဂဇက်ဆိုတဲ့နာမယ်နဲ့သတင်းစာထုတ်ဖို့.. စပြင်ဆင်တဲ့အနေနဲ့.. ဒိုမိန်းအမည်ဝယ်တဲ့နေ့ပေါ့..။ (ပုံကြည့်) MandalayGazette.com ကို သီးသန့်ထောင်ပြီး ဖိုရမ်လုပ်.. အပြန်အလှန်ဆွေးနွေးတာတွေအတွက်.. မန်င်ဘာတွေလက်ခံခဲ့တာမှာ.. မန်ဘာထောင်ချီရှိခဲ့ပြီး.. ၂၀၀ရ နဲ့ ..၂၀၀၈ ၊ သင်္ကန်းရောင်တော်လှန်ရေးနဲ့.. နာဂစ်မုန်တိုင်းခေတ်မှာ..AP, AFP တို့ကတဆင့်… ပြည်တွင်းက ဓာတ်ပုံတွေ နိုင်ငံတကာကို ဖြန့်နိုင်ခဲ့သမို့.. ဝက်ဘ်ဆိုက်လည်း နာမယ်ကြီး.. ဟက်ကာလည်းဝင်ဖျက်လိုက်ပါလေေရာပေါ့..။
အခုရှိနေတဲ့ WordPress ပေါ်ကဝက်ဘ်ဆိုက်ကတော့.. ၂၀၀၉ မှစထောင်တာဖြစ်ပါတယ်..။ အဲဒီခေတ်တွေက.. မြန်မာပြည်တွင်းဆိုတာက.. အင်တာနက်ဆို.. gmail တောင်အနိုင်နိုင်ကြည့်ရတာမို့.. Mandalaygazette.com ကျ.. မြန်မာပြည်စစ်အစိုးရကလည်း မပိတ်ထား..မဘမ်းထားသမို့.. ပြည်ပ/ပြည်တွင်းပေါင်းကူးဖြစ်ပြီး.. မန်ဘာတွေများ.. စာတွေ ပုံတွေတင်နဲ့တော်တော်စည်ကားခဲ့ပါတယ်..။
ရှေ့စကားပြန်ဆက်ရရင်.. အင်တာနက်ပေါ်မယ်….ဝက်ဘ်ဆိုက်လုပ်တော့… လိုဂိုလေးပါဒီဇိုင်းလုပ်ဆွဲ.. နောက်… ပုံနှိပ်သတင်းစာအတွက်..လိုအပ်မယ့် အဒိုဘီအင်ဒီဇိုင်းဆော့ဖ်ဝဲဝယ်..။ လေးအောက်အတွက် ဖရိမ်တွေချ..။ ကြော်ငြာတွေလိုက်နဲ့.. ပုံနှိပ်သတင်းစာကတော့ .. ၂၀၀၆ ဇူလိုင်မှာတကယ်ထွက်ဖြစ်သွားပါတယ်..။ စထွက်တော့.. စာမျက်နှာ၁၂မျက်နှာ နဲ့ ပါးပါးလေး..။( ပုံကြည့်..။)
ရန်ကုန်မှာကျောင်းသားဘဝက.. လေးအောက်ဒီဇိုင်းမှာကူလုပ်တုံးက.. ဂူတန်င်ဘတ်ရဲ့ ဂျိန်းဂျိန်းခဲစာလုံးပုံနှိပ်စက်ရယ်.. ဖူဂျီ ၂ကာလာပုံနှိပ်စက်ရယ်က … ထုတ်ပေးလိုက်တဲ့.. စာရွက်တွေကို.. ဒမ်ဘီချတယ်ဆိုပြီး.. ဖြတ်ညှပ်ကပ်.. လုပ်ပြီးလေးအောက်လုပ်..။
စာမူတွေလိုက်..။ စာပေစိစစ်ရေးဆိုတဲ့.. စစ်သားတွေအုပ်ချုပ်မင်းလုပ်တဲ့.. ရုံးကိုလက်ဆောင်ကြီးငယ်များနဲ့တကွ.. မဂ္ဂဇင်းစာမူတွေ ဖိုင်တွဲ… သွားတင်..။
ဆရာမောင်မောင်သိုက်၊ ဆရာကျော်ညွှန့်၊ ဆရာမျိုးမြင့် စတဲ့ပန်းချီဆရာတွေဆီမှာ.. သရုပ်ဖေါ်ပုံတွေအပ်..။
အဆင့်ဆင့်.. အဆက်ဆက်.. ၃လလောက်ကြိုလုပ်ခဲ့ရတာတွေကို.. သတိရမိသား..။
အခုကျတော့လည်း.. ကွန်ပြူတာရှေ့ချည်း.. တောက်လျှောက်ထိုင်နေလိုက်ရင်.. အကုန်ထွက်လာတာပဲပေါ့..။ တွေးနေမိတာပါ…။ ခေတ်ကြီးပြောင်းသွားချက်..။
ပုံနှိပ်စာတွေကို ဖတ်သူသိပ်မရှိတော့ဘူးထင်ရပေမယ့်… အရှိန်နည်းနည်းကျသလိုဖြစ်သွားပြီး.. ပြန်ခိုင်မာနေတယ်ပဲ.. မြင်မိပါရဲ့..။
အင်တာနက်ထဲက.. သတင်းတွေ..ပုံတွေ.. ခိုင်မှမခိုင်မာတာကိုး..။
နယူးစ်ဝိခ် မဂ္ဂဇင်းတောင်.. ပုံနှိပ်လောကကိုစွန့်ပြီး.. ၂၀၁၂အကုန်မှာ အင်တာနက်ဖက်ကိုပြောင်းသွားရာက.. ၁နှစ်ကျော်လောက်လဲကြာရော ပုံနှိပ်မဂ္ဂဇင်းပြန်ထုတ်နေရပါရောလား..။ ပလေးဘွိုင်းမဂ္ဂဇင်းကြီးကလည်း… ကိုယ်လုံးတီးမိန်းကလေးပုံတွေပုံနှိပ်မထုတ်တော့ပါဘူးပြောပြီး.. မထုတ်တော့ရာက..ပြီးခဲ့တဲ့ ၂လကတင်..ပြန်ထုတ်ရပြန်ရောလား..။
ဆိုတော့.. ပုံနှိပ်ခေတ်ကပြောသဗျ.. ငါမအိုသေး.. အဲ.. အဲ.. ခေတ်မကုန်သေး..။
မုဒိန်းကျင့်ခံမိန်းမများ.. မုဒိန်းကောင်များနှင့်.. တရားဝင်လက်ထပ်သင့်ပါသတဲ့….။
Wednesday5April 2017 04.33 EDT
ဘယ်လောက် ကြာရှည် ရပ်တည်ခဲ့ပြီ ဆိုတာထက် ဘယ်လောက်အချိန်တိုအတွင်းမှာ
ဘယ့်လောက် အောင်မြင်မှုတွေ ရခဲ့ပြီ ဘယ့်လောက် ဘယ်လိုအလုပ်တွေ လုပ်ခဲ့ပြီ ဆိုတာက ပို အရေးကြီးတယ် ဆိုကြပါစို့။
မြန်မာ့ဂဇက်က အားရစရာပဲလို့ ထင်မြင်မိပါကြောင်း။
ဗမာပြည်ထဲက လမ်းဘေးဈေးသည်လေးတွေကတော့. . .
”ငါတို့က ဒီနေရာမှာ ဈေးရောင်းစားလာတာ
နှစ်၂ဝ ရှိပြီကွ”ဆိုပြီး မပြောင်မလက်ပဲ ဝါးကပ်ကလေးခင်း ထိုင်နေခဲ့ရတဲ့ နှစ် ၂ဝကို ကြံဖန်
နှစ်များစွာအတွင်း ဒီအခြေအနေလေးကနေ ဘာမှ ထူးပြီး ပြောင်းလဲမလာတာကိုတော့ မသိ။
ခင်မင်ဖူးသမျှ မြင်ဖူးသမျှ ယွကျားတွေထဲ
အဲ အဲ အဲလို ယွကျားဂျီးက အူးဆောင်ဒဲ့ မြန်မာ့ဂဇက်ပဲဗျာ။။
နာမည်အရ ကြာရှည်ထင်ကျန်ဖို့ အဲဒီ ယွကျားဂျီး ကြိုးစားမယ် ဆွာ ယုံကြည်ပါတယ်။
ဘုန်းဂျီး တော့ မဝတ်ဖူးမလားး
အမှန်က ဝတ်ချင်လာမှာစိုးတဲ့စိတ်ကို ဇွတ် ဖျောက်ချင်တာနေမှာ
Saffron Revolution ဆိုပြီး ..၂၀၀ရ က.. Saffron အရောင်ခြုံတဲ့.. ဗုဒ္ဓဘာသာဝင်ရဟန်းတွေ.. ကမ္ဘာ့ဗုဒ္ဓဘာသာဝင်တွေ ပါဝင်တဲ့ ပွဲပြတ် တော်လှန်ရေးကြီးဖြစ်ဖို့ဟာ.. ကိုယ်ရွှေမြန်မာတွေ.. ရွှေကြိုက်ကြိုက်နဲ့.. ရွှေဝါရောင်”ထ”လုပ်ပြီး.. မူပိုင်သိမ်းလိုက်သမို့.. ကမ္ဘာ့ သင်္ကန်းရောင်ခြုံသူတွေနဲ့.. အရောင်တော်လှန်ရေးလုပ်လေ့ရှိတဲ့ တော်လှန်ရေးသမားတွေ လက်ရှောင်ခြေရှောင်သွားသမို့…
ရွှေမကြိုက်တဲ့နေ့မှ.. ပါတော့မယ်… လို့စ်..။
အပိုဆုရထားတဲ့.. ဂျပန်ကသတင်းထဲပါတဲ့.. မြန်မာ့ဂဇက်အကြောင်းလေးပါ… တင်ထားပြီး.. သမိုင်းချန်ရစ်လိုက်ကြောင်း..။
အမေရိက တပ်က.. ဗုံးတို့မိခင်ကို….အာဖဂန် အိုင်းဆက်ဒေသပေါ် မိတ်ဆက်ကြဲချ..။
by COURTNEY KUBE APR 13 2017, 2:13 PM ET
U.S. forces dropped one of the biggest non-nuclear weapons in its arsenal inastrike against ISIS in eastern Afghanistan on Thursday, according to Pentagon officials.
The U.S. droppedaGBU-43 bomb, nicknamed “the mother of all bombs,” on ISIS fighters and tunnels and caves used by the terror group in the country’s Nangarhar province, officials said.
Military officials believe it is the first time the weapon has been used on the battlefield. It was dropped from an aircraft.
နေစကြဝဌာထဲက.. ဂျူပီတာဂြိုလ်ရဲ့ လနဲ့.. စနေဂြိုလ်ရဲ့လ တို့က.. လူသားအခြေချနေနိုင်ခြေရှိ..။
Updated 3:02 PM ET, Thu April 13, 2017
(CNN)NASA has new evidence that the most likely places to find life beyond Earth are Jupiter’s moon Europa or Saturn’s moon Enceladus. In terms of potential habitability, Enceladus particularly has almost all of the key ingredients for life as we know it, researchers said.
အမေရိကားနဲ့သွားမရှုပ်မိဖို့ မြောက်ကိုရီးယားကို ချိုင်းနားက သတိပေး..။
By Bob Fredericks April 12, 2017 | 6:58am | Updated
.. နက်ရှိုင်းတဲ့ အပြောင်းအလဲတွေဖြစ်ဖို့ နှစ်များစွာ(နှစ်များစွာ)အချိန်ယူပါတယ်….တရက်၊ တပတ်၊ တနှစ်လောက်နဲ့.. မဖြစ်လာပါဘူးဆိုတဲ့အကြောင်း…..။
APR 18 2017, 9:39
သဘောင်္ကြီးမှာ သွားကားသွား၏။ သို့သော်ပြောင်းပြန်ကြီးဖြစ်လို့နေ၏။
By Amy Davidson April 19, 2017
သင်္ဘောက အခု လမ်းကြောင်းမှန် ပြန်သွားနေပြီတဲ့။ မြောက်ကိုရီးယားကို။ ဆော်စေချင်တာ။ သူ့တိုင်းပြည်တွင်း လူတွေ ဘယ်နည်းနဲ့မှ ရုန်းမထွက်နိုင်တော့ဘူး ထင်တာပဲ။ ပြင်ပအကူအညီရမှ။ ဒီတိုင်းလွှတ်ထားရင် စိတ်ဓာတ်မူမမှန်တဲ့ အာဏာရှင် လက်ထဲက နျူကလီးယားဗုံးတွေဟာ တနေ့တခြား အရည်အသွေးတက်လာပြီး သိပ်မကြာခင် တစ်ကမာ္ဘလုံးကို ခြိမ်းခြောက်မှာလို့ပဲ ထင်မိပါတယ်။
အရည်အချင်းနဲ့ အရည်အသွေး ပြည့်စုံနေသရွေ့ အောင်မြင်မှုကြီး ဆင်လင်အဓွန့်ရှည်နေမှာပါရှင်။
ဆက်လက်လို့ ရေးတာပါ စာတွေက မမြင်ရတော့ ဘိုလိုဖစ်တွားတာပါလိမ့်
ချိုင်းနားက မြန်မာတို့ရဲ့ ချိုင်းနီးစ်ဆောင်ကြာမြိုင်…
CHINA’S DARK SIDE Inside China’s brothel’s where Burmese women are forced by ruthless gangs to entertain rich businessmen
Fascinating photos show the country’s dark underworld which authorities are desperate to sweep away
24th April 2017, 5:13 pm
CHINA’S seedy underworld has been captured inafascinating series of photographs going behind the scenes of its brothels.
Snaps show clients spending hours with escorts paid to talk, sing and flirt in an industry valued at £220million.
Others show girls dancing onastage, under which customers who crowd then choose the entertainer of choice.
In the city of Ruilii, young Burmese convinced with promises of jobs are forced by Chinese gang to cross the border and marry Chinese bachelors.
Others are forced into prostitution in nightclubs and in many massage centres in the city.#
It is where the first outbreak of AIDS in the Middle Kingdom continues to have the highest rate of HIV across the country.
In China, prostitution is illegal but omnipresent, camouflaged with varying degrees of ambiguity.
Between 2000 and 2010, the number of prostitutes in the country had reached 10 million, The China Daily reported.
ဗမာနှင့်တိုင်းရင်းသား၁၃၅ = ဘယ်တော့မှ ငြိမ်းချမ်းရေးမရ…။
The hill forests of Karen State, Myanmar, were previously inaccessible to biologists and conservationists for security and political reasons. We have, however, now been able to conduct six surveys across the area, using camera traps, foratotal of 9,511 trap-nights, to ascertain the presence of threatened mammal species. We obtained 4,191 records of at least 31 mammal species, including 17 categorized as Near Threatened, Vulnerable or Endangered on the IUCN Red List. Carnivores were especially diverse, with 19 species recorded, indicatingaglobally significant community, including the tiger Panthera tigris, leopard Panthera pardus and dhole Cuon alpinus. Our methodology was not appropriate for estimating relative abundance or occupancy but the species richness of the mammal community, the number of records and the number of locations where species were detected suggest the area is important for the conservation ofaglobally threatened mammal community that is in decline across the majority of its range. Despite long-standing conservation efforts undertaken by the Karen people, their forests are threatened by hunting and habitat loss. These threats are likely to be exacerbated as political change brings rapid development. Urgent action is thus needed to assist the Karen people to protect one of South-east Asia’s last intact rich and diverse ecosystems.
Trump administration’s hardline immigration stance in Supreme Court case could see Melania Trump deported
The argument that even an “immaterial” error on official paperwork can justify deportation, put forward by the Trump administration inarecent Supreme Court case, would be sufficient to deport the President’s wife, Melania.
A Serbian woman was recently deported for failing to disclose her husband’s history in the military, thus settingatechnical precedent for deporting Ms Trump, as Slate reports.